कालो पोशाकमा सुर्खेतका किशोरीको प्रदर्शन : हामी चुप कहिल्य सम्म ? – Karnalitoday
कर्णालीटुडे २०७७, २३ कार्तिक आईतवार १४:३७
कात्तिक, सुर्खेत । बलात्कारबिरुद्ध कालो पोशाक लगाएर सुर्खेतका किशोरीहले वीरेन्द्रनगरमा विरोधस्वरुप प्रदर्शन गरेका छन् ।
पछिल्लो समय बलात्कारका घटना बढ्दै गएको र दोषीलाई कारबाही नभएको भन्दै उनीहरुले शनीबार देशभर एकसाथ प्रदर्शन गरेका हुन् ।
अँझै कति सहने ? स्वतन्त्र अभियानअनुरुप वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी चोकमा किशोरीहरुले कालो लुगा र मुख छोप्ने गरी कालो पट्टी बाधेर प्रर्दशन गरेका छन् । उनीहरुले हत्यारा स्वतन्त्र, पीडित गुमनाम भन्ने नारासहित नृत्य र नाटक पनि प्रदर्शन गरे ।
किशोरीहरुले ‘अझै कति सहने, घरभित्रै पनि होसियार, बलात्कार रोकौ, नो मिन्स् नो, स्टप रेप, हामी चुप कहिल्य सम्म ? बलात्कारीको लिंग हुँदैन’ लगायत नारा लेखेको प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
बलात्कारीविरुद्ध कडा कानुन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिन प्रदर्शन गरेको अँझै कत्ति सहने ? अभियानकी सुर्खेत संयोजक पुजा खड्काले बताइन् ।
अनुसन्धानको पाटो बलियो बनाईनुपर्ने, लैंगिकमैत्री कानुन बन्नुपर्ने, बलात्कारीलाई माफी दिन नमिल्ने, १८ बर्ष मुनिकोलाई बलात्कार गरे अपराधीलाई आजिबन काराबास र १८ बर्ष भन्दा माथिको ब्यक्तिलाइ बलात्कार गरे अपराधीलाई हुने (७ देखी १०) बर्षको अहिलेको सजाय हटाएर जन्मकैदको सजाय हुने कानुनी ब्यवस्था गर्न देशैभरबाट अभियान मार्फत माग गरिएको संयोजक खड्काको भनाइ छ ।
अभियानमा सहभागी विना चन्दले केटीहरुले लगाउने छोटो लुुगाका कारण बलात्कार बढेको भन्नेहरुलाई ईंगित गर्दै कवितामार्फत न्याय मरेको सुनाईन् । ‘लुटिएको शरिर अनि जलेको अनुहार बोक्दै म न्याय न्याय कराउँछु, उनले कवितामार्फत भनिन्, ‘साह्रै राम्री छे भन्दै फुर्काउथे मेरा बाबा मलाई, आज म ऐना हेर्न डराउँछु ।’
अभियानमा बोल्दै किशोरी रोसनी सिंहले राज्यको न्याय दिने निकाय निकै कमजोर बनेको बताईन् । उनले बलात्कारसंग सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान नै फितलो हुने गरेको भन्दै राज्य नै बलात्कारी बनेको टिप्पणी गरिन् ।
एकपटकको यौन सम्पर्कमा ३ करोड भन्दा बढि शुक्रकिट स्खलित हुन्छन्, जसमा एउटा शुक्रकिट महिलाको डिम्बासँग मिलन भएपछि भ्रुणको विकास शुरु हुन्छ । एकैपटकको यौनसम्पर्कमा गर्भ रहन्छ भन्‍न सकिदैन । एक महिनाको समयलाई उदाहरण लिऔँ । मानौँ, एक महिनामा हाम्रो बाउआमाको विचमा औषतमा २०-३० पटक यौनसम्पर्क भयो । सीधा हिसाब गरौँ, […]
२०७७, १९ मंसिर शुक्रबार २०:०५
मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्, बहुमतको हिसाब गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ !